Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo ka heshiiyey la dagaalanka Ururka Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo ka heshiiyey la dagaalanka Ururka Al-Shabaab
ANKARA – Wasiirka Arrimaha gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow iyo Wasiirka Arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylu ayaa ku heshiiyey jimcihii in labada dal ay si wadajir ah ula dagaalamaan argagaxisada.
Heshiiskan ayaa yimid kaddib markii Wasiirka Arrimaha Gudaha Turkiga Suleyman Soylu uu soo dhaweeyey dhigiisa Soomaaliya Abuukar Islow iyo wafti la socday magaalada Ankara sida ay ku warameen ilo dhanka ammaanka ah.
Ilo wareedyadan ayaa sheegay in labada Wasiir ay kawada hadleen sidii la isaka kaashan lahaa la dagaalanka ururka Fethullah Gulen ee argagaxisada ah.
Dhanka waxay kawada hadleen sidii tababar loo siin lahaa ciidamo gaar ah oo boolis ah kuwaasoo lagu wado in laga dhiso gudaha Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa labadii maalmood ee u dambeysay waxa uu booqasho ku joogay magaalada Ankara ,wuxuuna kula kulmay Madaxda dalka Turkiga sida Madaxweynaha Iyo Ra’iisal Wasaaraha.